अष्ट्रेलियामा पढ्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? यसरी रोज्नुहोस् युनिभर्सिटी,कसरी जाने डिपेन्डेन्ट भिसामा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
अष्ट्रेलियामा पढ्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? यसरी रोज्नुहोस् युनिभर्सिटी,कसरी जाने डिपेन्डेन्ट भिसामा
अष्ट्रेलिया । विदेश जाने विद्यार्थीको रोजाईमा अष्ट्रेलिया नै बढि पर्ने गरेको छ । अन्यदेशको तुलनामा आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीपढ्नको लागि अष्ट्रेलिया गएका छन् । कंगारुको देश अष्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीहरुको रोजाईमा रहेको छ ।
त्यसमध्ये व्यावसायिक विषयको रोजाइ धेरै पर्ने गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म अमेरिका र बेलायतमा अध्ययन गर्ने सपना हुने गरेता पनि पछिल्लो समय विद्यार्थीको विदेश अध्ययनको गन्तव्य फेरिएको छ । अधिकांश विद्यार्थीहरू अष्ट्रेलिया गएर अध्ययन गर्ने सपना सजाउन थालेका छन् । वैदेशिक अध्ययनको प्रमुख गन्तव्य अब अष्ट्रेलिया बन्न थालेको छ ।
पछिल्लो समयमा बेलायतका शिक्षण संस्थामा समस्या देखिएको र अमेरिकामा पढ्न महँगो खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीहरूको ध्यान अष्ट्रेलियातर्फ मोडिएको हो । अर्कोतर्फ अष्ट्रेलियामा तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा आफूले चाहेको विषय अध्ययन गर्न पाउने र अन्य सुविधाहरूसमेत प्रशस्त भएकाले धेरै विद्यार्थी अष्ट्रेलिया जान चाहेको शैक्षिक परामर्श कम्पनीका सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
विदेश पढ्न जानेको लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेसन लेटर’ लिनेमध्ये झण्डै आधाले अष्ट्रेलियाका लागि लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अष्ट्रेलियामा राम्रा युनिभर्सिटीले गर्दा विदेशी विद्यार्थीहरु आकर्षित छन् । ती युनिभर्सिटीमध्ये आफ्नो लागि उपयुक्त युनिभर्सिटी छनोट गर्नको लागि यी कुराहरुलाई ध्यानमा राख्दा सजिलो हुन्छ :
अष्ट्रेलियाका युनिभर्सिटीहरुका विभिन्न संगठन (नेटवर्क) हुने गर्छन् । उक्त युनिभर्सिटी कुन नेटवर्कसंग आबद्ध छ, त्यो अनुसार युनिभर्सिटीको कार्य र उद्देश्यको बारेमा जान्न सकिन्छ । ग्रुप अफ एट, द अष्ट्रेलियन टेक्नोलोजी अफ युनिभर्सिटीज, द रिजनल युनिभर्सिटीज नेटवर्क र द इनोभेटिभ रिसर्च युनिभर्सिटीज नेटवर्क अष्ट्रेलियामा रहेका युनिभर्सिटी नेटवर्क हुन् ।
त्यस्तै एसोसियसन अफ पेसिफिक रिम युनिभर्सिटीज, इन्टरनेसनल अलायन्स अफ रिसर्च युनिभर्सिटीज अन्तर्रा्ष्ट्रिय नेटवर्क हुन् । सबै युनिभर्सिटीहरुको सबै पक्ष सबल हुँदैन । आफूले रोजेको कोर्सलाई उक्त युनिभर्सिटीले प्राथमिकतामा राखेको छ कि छैन बुझ्नुपर्छ । आफ्नो लक्ष्यलाई युनिभर्सिटीको सबल पक्षले समेटेको भए मात्र उक्त युनिभर्सिटी रोज्नुपर्छ ।
युनिभर्सिटीहरुमा व्यवसायिक दक्षताको लागि दिईने ज्ञान, गेस्ट लेक्चर, फिल्ड वर्कको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिनुपर्छ । त्यस्तै युनिभर्सिटीले दिने छात्रवृत्ति र इन्टर्नशीपबारे थाहा पाउनुपर्छ । युनिभर्सिटीसँग आबद्ध कलेजहरुको संख्या र स्थिति, त्यहाँ विदेशी विद्यार्थीलाई दिईने प्राथमिकता, विदेशी विद्यार्थीहरुको संख्या र उनीहरुको अनुभव आदि बुझ्नुपर्छ । जसले गर्दा आफूलाई विदेश विद्यार्थीहरुसँग घुलमिल हुने र विभिन्न क्षेत्रको ज्ञान लिने अवसर मिल्छ ।
अध्ययन भिसा नेपालबाट अस्ट्रेलियाको कलेज र युनिभर्सिटीमा भर्ना हुने प्रक्रिया हो । प्लस टु, स्नातक या मास्टर्स सकेको छ र थप अध्ययन गर्न जान चाहन्छ । भाषाको परीक्षा चार किसिमको मध्ये कुनै एक दिनुपर्छ । आईएलटीएस (इन्टरनेसनल इंग्लिस ल्याङ्वेज टेस्टिङ सिस्टम) पढेकै हुनुपर्छ ।
पढेको तहको सर्टिफिकेट, भाषाको रिजल्ट, अनुभव भएमा त्यसको सर्टिफिकेटसहित कलेज युनिभर्सिर्टीको आवेदन फाराम भरिन्छ । भाषा टेस्टको नियम भने कलेज युनिर्सिटी र कोर्सपिच्छे स्कोर (प्राप्तांक) फरक फरक हुन सक्छ । यी सबै कागजातसहित आवेदन दिएपछि कलेज युनिभर्सिटीले या त स्वीकार गर्छ र अफर लेटर (अफर अफ अ प्लेस)
पठाउँछ । विश्वविद्यालय छनोट, विषय स्पष्टता, विषयको गरिमा, समय अवधि, अस्ट्रेलियामा पढेको कुन कोर्स नेपालका निम्ति पनि काम लाग्छ अथवा त्यो विषयको विश्व बजार (स्कोप) कस्तो छ भन्नेबारे जानकारी लिनैपर्छ । आफ्नो योग्यता, रुचि, चाहनाबारे प्रस्ट हुन जरुरी छ । त्यसनिम्ति परामर्श दातृ निकाय वा अनलाइनबाट जानकारी लिन सकिन्छ ।
दक्षिण अष्ट्रेलियामा उदाहरणिय बन्दै नेपाली समुदाय,सुरु गरे प्रविधियुक्त सामूहिक तरकारी खेती (फोटो/भिडियो)
अष्ट्रेलिया । एङलभेल ,एडेलेड । दक्षिण अष्ट्रेलियाको' एङलभेल'भेगमा नेपालीहरुले सामूहिक तरकारी खेती सुरु गरेका […]